डाक्टरले बिरामीको सेवालाई नै धर्म स्विकारिसकेका हुन्छन – Health Post Nepal
२०७७ असोज ७ गते | Wednesday, 23 Sep, 2020
डाक्टरले बिरामीको सेवालाई नै धर्म स्विकारिसकेका हुन्छन
२०७५ कार्तिक २ गते ७:५५
बाल्यकालको दसैँ सम्झँदा उडेर त्यहीँ पुगौँ लाग्छ
भाइटीकाको दिन जिम्मेवारीबोध हुने गर्छ
यो वर्ष पहिलोपटक आफैँ जमरा राखेँ
यो वर्ष दसैँ छैन, प्रतिष्ठानकै काममा व्यस्त
दसैँमा बचाएको बच्चा अहिले डाक्टर भइसक्यो
बुबाको जागिरको सिलसिलामा हाम्रो स्कुलिङ काठमाडौंमै भयो । दसैँमा लामो स्कुल बिदा हुने, बिदा हुनासाथ दसैँ मनाउन पहाड (नुवाकोट) जाने चलन भएकाले हामी महिनादिनअगाडिबाट दसैँ आउने दिन गनेर बस्थ्यौँ । हामी धेरै दाजुभाइ–दिदीबहिनी, अनि गाउँमा काका–काकी, हजुरबुबा–हजुरआमासँग भेटघाट हुँदा असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो ।
जब हामी घर जान्थ्यौँ, नवरथा सुरु हुन्थ्यो, मेरी आमा अलिक धार्मिक भएकाले हरेक दिन घरमा चन्डी पाठ हुन्थ्यो । घरमा बिहान ४ बजेदेखि नै चहलपहल सुरु हुन्थ्यो । नवरथामा बिहानै गुन्जिएको त्यो चण्डीध्वनि, त्यसका हरेक शब्द अहिले पनि कानमा गुन्जिन्छन् । त्यसको यादले फेरि त्यही समय, त्यही गाउँमा पु-याउँछ । त्यसवेलाको दसैँको रौनकले मनमा तरंग ल्याउँछ, जुन शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन ।
रमाइलोको कुरै सीमै थिएन, हामी काठमाडौं बस्ने भएकाले गाउँमा भाउजू–दाइहरूले हामीले जे–जे खान मनपराउँछौँ (काँक्रो, केरा, कुखुराको अण्डा, पाकेको अम्बा) सबै हाम्रा लागि साँचेर राखिदिनुहुन्थ्यो । ती कुराहरूमा निकै आत्मीयता हुन्थ्यो । त्यसवेलाको दसैँ अहिले यादमा मात्र छ, अब त्यस्तो दिन फर्केर आउलाजस्तो लाग्दैन ।
यसपालि हाम्रो परिवारमा दुःख परेको छ, मेरी भाइबुहारी बितेको ३ महिना मात्रै भयो । त्यसैले यो दसैँ सबै परिवार सँगै बसेर दुःख सेयर गरेर बिताउने योजना छ ।
जब म मेडिकल अध्ययनतिर लागेँ, त्यसपछि भने पहिलेजस्तो धेरै समय आफन्तसँग बिताउन पाइनँ । दाजुभाइसँग सँगै बसेर खाइरहेको निकै याद आउँथ्यो । पढाइ सकेर स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेपछि त झन् चाड भनेर बस्न पाइने कुरै भएन । स्वास्थ्यकर्मीले कुनै पनि वेला अरूले जति चाडबाड बनाउन पाउँदैनन् । त्यसमा पनि सुरुसुरुमा त स्वास्थ्यकर्मी निकै कम हुन्थे । त्यसैले चाडबाडमा पनि ड्युटीमा खटिनुपथ्र्याे ।
०३६ मा म घरबाट ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको स्वास्थ्यसंस्थामा काम गर्थें । तर, दसैँमा अन्तिममा मात्रै घर पुगेको मलाई याद छ । त्यस्तै, ०४८ मा प्रसूतिगृहमा काम गर्दा पनि दसैँमा अन्तिम दिन मात्रै घर पुगेको छु । बिरामीको सेवालाई नै आफ्नो धर्म स्विकारिसकेका हुन्छन् चिकित्सकले । त्यसैले पारिवारिक कुरालाई त्याग्न सकिन्छ सजिलै ।
अहिले दसैँ सानो सिरा तथा आफ्नो घरभित्र मात्रै सीमित भएको छ । यसपालि हाम्रो परिवारमा दुःख परेको छ, मेरी भाइबुहारी बितेको ३ महिना मात्रै भयो । त्यसैले यो दसैँ सबै परिवार सँगै बसेर दुःख सेयर गरेर बिताउने योजना छ ।
प्रस्तुति : गीता सापकोटा
Tags: दसैँ अनुभूति
तुलसीपुरमा ७ महिने र चारवर्षे बालकसहित २१ जनामा कोरोना
भक्तपुरमा किन बढ्दैछन् कोरोना संक्रमित?
औषधीको माग घटेपछि देउराली-जनताको उत्पादन बन्द
भूगर्भशास्त्रीको कोरोना अनुभव : ‘अब घर फर्किन्न भन्ने स्थितिमा पुगेकाे थिएँ’
यसरी स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्ने हो भने सेवा दिन सक्दैनौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६४७ जना कोरोना संक्रमण
अन्ततः टिचिङमै पुगे डा. केसी
एकैदिन थपिए १ हजार ३ सय ५६ जना कोरोना संक्रमित
भेरीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. थापा पनि संक्रमित
केसीलाई यसरी तलार्दै लगिएको थियो विमानस्थलबाट ट्रमा सेन्टर(भिडियोसहित)
अनमी, सिएमएलगायतका २३८ टि-एसएलसी कार्यक्रम र प्रमाणपत्र तह खारेज (आयोगको निर्णयसहित)